“Qaybteenii meeday ?” Su’aasha kaliya ee uu C/wali Gaas waydiiyay Madaxwayne Farmaajo. | BanaadirTimes.com
“Qaybteenii meeday ?” Su’aasha kaliya ee uu C/wali Gaas waydiiyay Madaxwayne Farmaajo.
Madaxwayne Farmaajo iyo C/wali Gaas oo islataagan, xilli uu Madaxwayne Farmaajo oo ay weli u socoto Booqashadiisa Deegaanadda Putland, Waqooyi Bari Soomaaliya.
Madaxwaynaha DFS Farmaajo oo la shiray wasiiradda maamul gobaleedka Putland ayaa sheegay in waxa ugu badan oo uu kala hadlay madaxwaynaha maamulkaas C/wali Gaas in ay ahaayeen sida ay Putland qaybteeda uga heli lahayd dhaqaalaha dalka Soomaaliya la keeno oo u badan deeqo dalka kasoo gaara wadamadda ay hadba madaxda markaas dalka hogaamisa saaxiibadda dhow yihiin iyo qaramada midoobay.
Madaxwayne Farmaajo ayaa cadeeyay kaliya in madaxwaynaha Putland uu waydiiyay asaga qeeybteenii meeday ? Qaybta Putland ku leedahay dhaqaalaha Soomaaliya la keeno.
Madaxwaynaha ayaa yiri,” Dhaqaalaha oo soo gala dalka, oo lagu keeno magac Soomaaliya ma laha kaliya meel gaar ah, dhaqaalahaasi waxaa loo asteeynayaa guud ahaan baahida dalka ka jirta, maxaa yeelay adeegee ka mid yihiin dadka loo adeegaayo,..”
Madaxwaynaha oo hadalkiisa si wata ayaa C/wali Gaas iyo Wasiiradiisa ugu laab qaboojiyay in horay aysan wax u jirin balse hadda ay waxaan badanayn bilaawdeen taasna ay ka dhiganthay in Putland iyo Guud ahaanba dalka ay gaarsiin doonaan dhaqaalahaas.
Putland ayaa madaxda dalka ee markasta booqda waxay hor dhigaan dalabyo aad u waawayn, ayaagoo waydiista in loo fuliyo mashaariic kuwaas oo ay fulintooda madaxda Villa Soomaaliya joogta ku kala aragti duuwanaadaan. Waxay isku diraan madaxda ilaa ay sababto in madaxdaas qaarkood ay xilalkooda waayaan.
Lama oga sida uu Farmaajo xukuumadiisa iyo Raisulwasaarahoodaba ugu qancin doono in Putland dhaqaale dheeraad ah la siiyo ayadoo Putland aysan wax canshuur ah siinin dowladda dhexe ee dalka tiiyoo ay usii dheertahay in DFS Putland siiso lacag dhan 4,675, malyan oo doollar, oo ah lacag ugu yaraan 6 mar kabadan inta Hirshabeelle la siiyo sanadkii oo ah 750 kun oo doollar kaliya. Waxaa kaloo jirta in Putland ay gashay heshiisyo aysan hadda Cadayn in dowladdu Raali ka tahay, waxaana ugu wayn heshiisyadaas mid ay la saxiixdeen shirkadda Imaraadka laga leeyahay ee Dp world oo ku kacaya ugu yaraan $336 milyan oo dollar.
Madaxwayne Farmaajo ayaa booqanaya deegaanadda Putland, halkaas oo uu kaga qayb galay furista garoonka diyaaradaha Garowe oo ay dhistay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga waxaana maalgaliyay dowladda Kuwayt, sidoo kale wuxuu booqday magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto Magaalada Qardho wuxuuna kula kulmay Boqorka Darood Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ay kawada hadleen xaaladda dalka iyo arrinta Mucaaradka oo beryahaan dambe soo xoogeysanayay.